Vaovao - Ny rafitra lamba sy cad miavaka anay
Spandex Latex dia lamba mitambatra sarimihetsika latina, izay novolavolain'ny orinasa tsy miankina. Izy io dia mandray teknolojia nano-composite.
Manana elastika avo amin'ny lafiny efatra izy, tsy mora vaky, tsy mandray rano, ary manana ny asan'ny hatsembohana amin'ny fanatanjahan-tena sy ny fahasalamana.
Ny vokany henjana dia azo ampitahaina amin'ny latema voajanahary. Hifandray amin'ny fitaovana gel silica izy ary soloina ny latèle voajanahary.
Fandrafetana lamba latsafa Spandex: ny sosona voalohany dia ny sarimihetsika PU mifangaro latex, ny sosona faharoa kosa dia sosona spandex vita amin'ny kofehy, ary ny sosona fahatelo dia sosona nano-adsorption.
Fitaratra lamba spandex latina firafitra: ny sosona voalohany dia tara-pahazavana mifangaro pu sarimihetsika, ny sosona faharoa kosa dia fonosana namboarina spandex sosona, ny sosona fahatelo dia nano-adsorption sosona, ary ny sosona fahefatra dia fangaro sarimihetsika PU mifangaro.
Taorian'ny traikefa nandritra ny folo taona mahery, dia nanatsara ny kinova fanavaozana ny rafitra fanaovana takelaka CAD izahay. Izy io dia rindrambaiko ho an'ny fanaovana takelaka solosaina akanjo, fanaovana kaody ary fametrahana. Izy io dia rafitra CAD akanjo vaovao sy feno endrika. Ity rafitra ity dia mety kokoa amin'ny famolavolana sy fanaingoana ny fitafiantsika manokana. Manatanteraka an-tsakany sy an-davany ny fanapahana angon-drakitra namboarina izy, ary marina kokoa ny angon-drakitra, izay manampy antsika hamorona akanjo mety kokoa namboarina ho an'ny mpanjifa. Ny fitafiantsika dia tsy mitovy amin'ny akanjo mahazatra. Mila mpamorona manokana ny famolavolana, ny lamba manokana, ny fanaovan-takelaka sy ny fanapahana lovia CAD manokana ary ny fivadihan'ny matihanina amin'ny fikarakarana. Ny fikatsahana fahalavorariana no tanjontsika mandrakizay. Ny catuit anay dia endrika iray mifangaro volo sy mirindra. Mifanentana tsara amin'ny andilana ary malefaka be. Tsy misy soritra aforitra avy any ambony ka hatrany ambany. Izany dia noho ny fitaovana matihanina sy ny endrika matihanina ary ny mpanjaitra matihanina. Misy ihany koa mpanolo-tsaina akanjo manolo-tena hanompo anao. Raha mbola manontany ny zavatra ilainao ianao dia afaka manome anao ny akanjo tadiavinao.
Fotoana fandefasana: Aug-27-2020